Warbixin: Kooxda Catalans ka ee Barcelona oo dooneysa iney lasoo saxiixato xidiga weerarka ugu ciyaara kooxda Roma. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Warbixin: Kooxda Catalans ka ee Barcelona oo dooneysa iney lasoo saxiixato xidiga weerarka ugu ciyaara kooxda Roma.
Warbixin: Kooxda Catalans ka ee Barcelona oo dooneysa iney lasoo saxiixato xidiga weerarka ugu ciyaara kooxda Roma.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 7-06-16 11:15 AM Barcelona ayaa lasoo tabinayaa iney u kuur galeysay sidii ay xagaagan ugu dhaqaaqi lahed soo xero gelinta xidiga weerarka ugu ciyaara kooxda AS Roma Antonio Sanabria.
20 Sano jirkan u matalay xulka Paraguay 6 jeer ayaa horey ugu soo mid ahaaday kooxda Catalans ka ee Barcelona intii u dhaxeysay sanadihii 2009 ka ilaa 2013, balse xidigan marna kama uusan soo muuqan kooxda heerka koowaad.
Xidigan ayaa usoo dhaqaaqay kooxda Sassuolo sanadkii 2014 ka kahor inta uusan ku biirin kooxda AS Roma taas oo uu fursad ugu helay kaliya inuu kasoo muuqdo labo jeer kooxda koowaad ee ka dhisan gegida Olympico.
Sanabria ayaa ku qaatay xilli ciyaareedkii tagay 2015/16 kooxda Sporting Gijon isaga oo qaab amaah ugu wareegay halkaas waxa uuna u dhaliyey xidigan kooxda Gijon 11 gool 30 kulan uu kasoo muuqday horyaalka La Liga ha dalka Spain sida lagu xusay wargeyska Sport ee kasoo baxa dalka Spain.
Barcelona ayaa dooneysa iney dib usoo cesheto ciyaaryahankeedii hore xilli macalinka kooxda Blaugrana Luis Enrique uu la dhacay qaab ciyaareedka wanaagsan ee uu xidigan kusoo bandhigay kooxda Sporting Gijon.